HomeWararka CiyaarahaIvory Coast, Tunisia iyo Xulalka kale ee Xalay u soo Baxay Wareega 16-ka ee Koobka Qaramada Afrika
January 21, 2022 Wararka Ciyaaraha, Koobabka Qaramada 0
Ivory Coast ayaa u soo baxday wareega 16-ka ee koobka qaramada Afrika waxayna u dirtay xulka difaacanayay koobka ee Algeria kadib markii ay 3-1 ku garaacday Algeria garoonka Japoma Stadium.
Algeria ayaa u baahneyd guul si ay tartanka ugu sii jirto, laakiin kooxda difaacaneysa koobka ayaa u safartay dalkooda ka dib markii ay ku dhameysteen kaalinta ugu hooseysa Group E.
Isla Guruubkan Gool uu dhaliyay Pablo Ganet ayaa 1-0 kaga badiyeen xulka Sierra Leone iyadoo Equatorial Guinea ay ku biirtay Ivory Coast oo u soo baxday wareega 16ka koobka qaramada Afrika iyagoo ka soo baxay Group E.
Labadan kooxood ayaa ogaa guul ay ku gaadhaan Limbe inay u gudbi doonto wareega xiga, Iban Salvador ayaana Goolkaasi ka Caawiyay.
Daqiiqadii 93-aad ee ciyaarta gool cajiib ah oo uu u dhaliyay Ablie Jallow ayaa Gambia si lama filaan ah 1-0 uga badisay Tunisia, inkasta oo labada xulba la hubiyay in ay u soo bixi doonaan wareega 16ka ee koobka qaramada Afrika iyada oo aan loo eegin guuldarada.
Gambia ayaa ciyaarta badisay iyadoo kaalinta koowaad ee Group F ay ku soo baxday farqiga goolasha ee Mali oo 2-0 uga badisay Mauritania, waxayna wareegga 16-ka la ciyaari doontaa Guinea, halka Tunisia oo ku jirta kaalinta saddexaad ay wajihi doonto Nigeria.
Kulamada kale Mali ayaa ku soo baxday kaalinta kowaad ee Group F ee koobka qaramada Afrika ka dib markii ay 2-0 kaga badisay Mauritania kulankoodii u dambeeyay.
Eagles-ku ayaa ay u baahneed si fudud natiijada Gambia si ay u hogaamiyaan kala sareynta,waxana ay sidaas sameeyeen iyadoo ay 1-0 kaga soo badiyay Tunisia.